Zeplastiki sokubumbela ziphene yokubumba bahambelane mkhuba wophuhliso kwixesha elizayo - Aojie zomngundo Co., Ltd.
Zeplastiki sokubumbela ziphene yokubumba bavumelane mkhuba wophuhliso kwixesha elizayo
Ngoku imeko yoluntu, ukukhula komngundo kuyakhawuleza kakhulu. Ukulungiswa kwenaliti yeplastikhi kuyathandwa kakhulu ngabantu. Ngaphantsi kwethemba lentengiso, ikamva linokulindelwa. I-Shandong Zheng's Plastic Mold Factory ihambelana nokuphuhliswa kwamaxesha, kwaye iteknoloji yayo iphucula ngokukhawuleza.
Imeko yangoku yokuphuhliswa kwenaliti yokubumba imeko yangoku yesakhiwo semveliso yeshishini leplastiki laseTshayina liye lafumana ngaphezulu kwesiqingatha senkulungwane, kwaye lenze inkqubela phambili enkulu. Kwisikhunta esikhulu, sivelise i-intshi ezingama-48 ezinkulu zeplastikhi yenaliti yokubumba inaliti, i-6.5kg umatshini omkhulu wokuhlamba amandla, isikhunta esipheleleyo seplastikhi, kunye nebhampasi yemoto kunye nokubumbana kwedeshibhodi yedashboard. Ngokweendlela zokubumba zeplastiki ezichanekileyo, sikwazile ukuvelisa izinto zeplastiki kunye nokubumba kweekhamera. Cavity umnqongo ezincinane izixhobo sokubumbela kunye nokuvunda zeplastiki.
Okwangoku, ukubumbela kwembaleki eshushu kuye kwandiswa ngokuthe ngcembe, kwaye ngaphezulu kwe-20% isetyenzisiwe kwimizi-mveliso ethile. Bahlala besebenzisa ubushushu bangaphakathi okanye ubushushu sangaphandle izixhobo zembaleki, kunye nenqanaba eliphambili lehlabathi leenaliti ezinzima izixhobo zeembaleki ezishushu. Inqanaba phambili kwinqanaba inaliti vana eshushu imbaleki ngumngundo. Nangona kunjalo, inqanaba lokwamkelwa kwembaleki eshushu ngokubanzi lingaphantsi kwe-10%, eyahluke mpela kuleyo ingama-50% ukuya kuma-80% phesheya.
Ukusetyenziswa kwe-CAD / i-CAE / i-CAM kunye nophuhliso olukhawulezayo lweshishini lokukhanya kunye nemveliso yeemoto, uyilo lwesikhunta luye lwachaphazeleka ngokubanzi, kwaye lwenza icandelo. Nangona kunjalo, ishishini lokungunda laseTshayina kukunqongophala kwabasebenzi bobuchwephesha, iindidi, ukuchaneka okuphantsi, umjikelo omfutshane wokuvelisa, ubomi obufutshane, ukunikezelwa okufutshane. Ezinye izinto ezinkulu, ezinzima nezintsonkothileyo azinakwenziwa ngokwazo. Kuthatha izigidi kunye namashumi ezigidi zeedola ukungenisa kumazwe aphesheya minyaka le, ethintela ukukhula kweshishini lokungunda. Ke ngoko, kubalulekile ukuphuhlisa ishishini lokungunda. Ukuze kuphuculwe inqanaba loyilo kunye nokulungiswa kweshishini lamashishini okubumba. Inkqubo ye-CAD / CAE / CAM ekhuthazwayo ngumbutho we-China Die & mold ifanelekile kwiNkampani ye-Die & Mold kunye noshishini lokufa kunye nokubumba kwesizwe.
Inkqubo ye-CAD / CAE / CAM yoyilo lokungunda kunye nokuchaneka akufuneki inkqubo enkulu kakhulu, kodwa ifuna iimfuno eziphezulu kwezinye izinto, ezinje ngomzekelo womhlaba kunye ne-axis ezintathu ze-CNC. Nangona ezinye iinkqubo ze-CAD / CAE / zeCAM zangaphandle zinemisebenzi enamandla yokomfuziselo womphezulu we-3D, uhlalutyo lolwakhiwo lwezinto ezigqityiweyo, ukuveliswa ngoncedo lwekhompyuter kunye nolawulo lwedatha yemveliso, kuyabiza kwaye kunzima ukuthwala iinkampani ngokubanzi.
Isikhululo sokulungisa inaliti yeplastikhi kwindawo ephambili yophuhliso lwamaxesha, kwimeko yomoya, ikamva lilindelekile.